70- Ilaalooyinkii ka dambeeyey Cumratul-qadaa'
Rasuulku SCW cumrada ka dib intii aan la gaarin dagaalkii Mu'ta wuxuu direy dhorkan sariyo (ilaalo).
1. Ilaalo uu madax u ahaa Ibnu Abil-Cawja oo uu Rasuulku SCW bishii Dil-Xija, sannadkii 7aad ee hijriga u diray qabiilkii reer banuu Suleym si loogu yeero islaamka hase yeeshee markii arrinkaas loogu baaqay way diideen. Ka dib waa lala dagaallamay oo la jebiyey, waxaana laga soo qafaashay labo nin, ciidankii muslimiinta oo uu ka soo dhawacmay hoggaamiyihiina waxa ay ku soo laabteen Madiina.
2. Ilaalo uu hoggaaminayey Qaalib binu Cabdullaahi oo uu Rasuulku SCW bishii Safar, sannadkii 8aad ee hijriga u direy qabiilkii laayey ilaaladii Bashiir binu Sacad. Ciidankan oo ka koobnaa 200 nin waxa ay tageen meeshii loo direy, si fiican ayeyna u soo edbiyeen qabiilkaas, qaniimana way soo heleen, ka dibna waxa ay ku soo noqdeen Madiina.
3. Ilaaladii Daati Adhlax oo ka koobnayd 15 nin, uuna madax u ahaa Kacab binu Cumeyr Al-ansaari oo uu Rasuulku bishii Rabbiicul-Awal, sannadkii 8aad ee hijriga u direy banii Qudaaca ka dib markii uu maqlay in ay u tabaabusheysanayaan sidii ay ugu soo duuli lahaayeen muslimiinta. Kacab iyo ciidankiisii waxa ay qabiilkaa ugu yeereen islaamka hase yeeshee way diideen oo weliba weerar ayey ku soo qaadeen muslimiintii. Dagaal ayaa halkaas ka dhacay, waxaana goobtaas ku shahiiday dhammaan ciidankii muslimiinta marka laga reebo labo nin oo meyd kala dhex gashay iyo nin kale.
4. Ilaaladii Daatu Cirqin oo uu Rasuulku SCW isla bishii Rabbiicul-Awal, sannadkii 8aad ee hijriga u direy banii Hawaasin. Rasuulku SCW markii uu maqlay in ay qabiilkaasi mar kale abaabul galeen ayuu u dire 25 nin oo uu madax uga dhigay Shujaaca binu Wahab, hase ahaatee wax dagaal ihi ma dhicin.